पुजाले मेरो नेवारसँग जम्छ भन्दा आकाशले यसो भने
गफगाफ / अभिनेत्री पुजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको जोडी पहिलो पटक सिनेमा रामकहानीमा देखिँदैछ । यो सिनेमा भदौ २२ गते अर्थात यहि शुक्रबार देखि प्रदर्शनमा आउँदैछ । यो सिनेमाको प्रदर्शन हुनु अगाडि नै सिनेमाका कलाकारको कारण धेरै नै चर्चा भएको छ । एकातिर सिनेमामा हाँस्यकलाकारहरुको बाहुल्यता छ भने अर्कातिर दर्शकले अभिनेता आकाश र अभिनेत्री पुजा शर्माको जोडी मन पराएका छन् । पर्दामा उनीहरुको जोडी राम्रो देखिएकै कारण यतिेबला सिने नगरीमा उनीहरुको अफेयरको हल्ला पनि चलेको छ । यसले पनि सिनेमाको हाईप बढेको देखिन्छ ।
आकाश र पुजाको पहिलो भेट सिनेमा रामकहानीकै क्रममा भएको हो । उनीहरुले यस अघि एकअर्कालाई भेटेका थिएनन् । एकअर्काको कामको बारेमा भने जानकार थिए । रामकहानीको लागि आकाश श्रेष्ठ फाईनल भएपछि नै पुजा र आकाशको भेट भएको थियो । पहिलो पटक भेट्दा एक अर्कासँग के बोल्ने ? र कसरी प्रस्तुत हुने ? भन्ने कुरामा दुवै जना अलिमलिएको बताउँछन् । के बोल्ने ? र कसरी प्रस्तुत हुने ? भन्ने अवस्थाबाट शुरु भएको उनीहरुको सम्बन्ध अहिले निकै नै निकट भईसकेको छ । उनीहरु एक अर्कासँग निकै नै घुलमिल छन् । पछिल्लो समय उनीहरु अफेयरमा रहेका खबरहरु पनि आईरहेका छन् । यस्ता खबर र यस विषयमा सोधिएका प्रश्नमा उनीहरुले आफूहरु सिनेमा प्रदर्शन हुँदासम्म एक अर्कालाई माया गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् ।
यहि प्रसंगमा पूजाले आफ्नो स्कुल र कलेजमा पनि नेवार साथी बढी भएको बताउँदै आकाशसँग पनि आफ्नो सम्बन्ध राम्रो भएको र आफू नजिक भएको बताईन् ।
उनले भनिन्, मेरा धेरै नेवार साथीहरु छन् । यहि कारण पनि सिनेमामा आकाश हुने भएपछि मलाई ऊ नजिक हुन्छ भन्ने लागेको थियो । र भयो पनि । ीकन किन मेरो नेवारहरुसँग जम्छ । यहि प्रसंगमा आकाशले पनि ठट्यौली पारामा थपे, मेरो पनि शर्मासँग जम्छ ।